Umenzi we-Sodium Hyaluronate, ifektri ye-Hyaluronic Acid, umkhiqizi we-hyaluronan - AWA
Ukuhlonishwa Futhi Iziqu
Izimakethe Zethu Eziyinhloko
IYINI ISODIUM HYALURONATE
I-sodium hyaluronate usawoti osuselwa ku-hyaluronic acid, enesisindo samangqamuzana ukusuka ku-3000Da kuya ku-2500KDa ne-CAS no. 9067-32-7. Yi-polymer mucopolysaccharide exhunywe kaningi ngama-N-acetylglucosamine nama-D-glucuronic acid disaccharide amayunithi. Kuvele ngokwemvelo esikhunjeni, emehlweni, emalungeni nakwezinye izitho nezicubu ezithintekayo. Kutholakale ukuthi i-sodium hyaluronate inemisebenzi eminingi yokusebenza komzimba, njengokubamba iqhaza ku-moisturizing, i-lubrication, ukuphulukisa amanxeba, ukulungisa izicubu, ukuvuselelwa kabusha, ukuphendula kokuvuvukala, ukuthuthukiswa kwe-embryonic, njll.
I-sodium hyaluronate isetshenziswa kabanzi emikhiqizweni yokudla, izimonyo, nakwezemithi. Ukuphepha kwayo sekuqinisekisiwe, futhi akunakwenzeka ukuthi kubangele ukusabela kwe-anaphylactic ngoba kusatshalaliswa ngokwemvelo emzimbeni womuntu. Kunezindlela ezimbili zokukhiqiza i-sodium hyaluronate, ukukhishwa kwikhamu lezinkukhu, kanye nokuqalwa kwebhayoloji. Sisebenzisa ukuvutshelwa kwezinto eziphilayo, okungeyona eye-GMO, akukho mthombo wesilwane.
I-sodium hyaluronate iyisakhi esiyinhloko sezicubu ezixhunyiwe ezifana nezinto ezihlangana nabantu, umzimba we-vitreous, kanye noketshezi olugeleza emzimbeni. Inemisebenzi eminingi yomzimba. Lapho kuncipha, ukugula kuza. Ngakho-ke abantu bayisebenzisela ukwelapha izifo ezihlinza izifo kanye nokuhlangana, imibimbi ebushelelezi, ukuphulukisa amanxeba, njll.
I-sodium hyaluronate isatshalaliswa ngokwemvelo emzimbeni womuntu, eyehla ngenkathi kuhamba isikhathi. Kufakazelwe ukuthi abantu bangathola i-sodium hyaluronate ngokudla. Kuya ngokuya kuthandwa ukuthi abantu babe nezithasiselo zokudla okunempilo ukuze bathuthukise impilo. Ngokuvamile kuza namavithamini, i-chondroitin sulfate, njll.
I-Oligo sodium hyaluronate ingumkhiqizo omusha okhiqizwe ubuchwepheshe bokuchithwa kwe-bio-enzymatic. Isisindo sayo samangqamuzana yi-3,000Da-10,000Da, etholwa kalula ngumzimba womuntu futhi inomphumela ojulile wokuswakama.
> I-EYE DROPS GRADE sodium hyaluronate
I-sodium hyaluronate ingathuthukisa kakhulu i-bioavailability yezidakamizwa ngokuqina komzimba wayo, ukuhlangana kolwelwesi, kanye nokuhlanganiswa nezidakamizwa. Izinzuzo zalo azifaniswa ezinye izinto ze-polymer. Kungabuye futhi kuguqulwe ngokuxhumanisa nokuphinda kubuye kwenziwe isikhathi eside ukuze kugcinwe isikhathi esweni futhi kubuye kukhulise ukwanda kwe-bioavailability yomuthi.
EP-cosmetic Paris 2019
I-BEACH TEAM-UKWAKHIWA 2020.7
AmaVitafoods Geneva 2019
SHANDONG AWA BIOPHARM CO., LTD. yasungulwa ngoJulayi 15, 2010. Inkampani njengamanje inempahla ephelele ye-yuan ecishe ibe yizigidi eziyi-100, enabasebenzi abangaphezu kwe-100. Umthamo waminyaka yonke uzungeze i-130MTs njengamanje, kufaka phakathi i-100MTs yezimonyo nokudla kwe-HA yama-20, ama-20MTs we-oligo HA, ama-10MTs wamehlo ngebanga le-HA le-3MTs ye-injection grade HA. Ngobuchwepheshe obuthuthukisiwe bokukhiqiza, ikhwalithi ephezulu yomkhiqizo, kanye nensizakalo enhle kakhulu yokuthengisa, sinqoba ukuhlonishwa okuhle nokuthenjwa kumakhasimende.
Ngemuva kwemizamo emikhulu yeminyaka eyi-10, sibhale ku-New Three Board (Ikhodi yamasheya: 832607) futhi sathola izitifiketi eziningi kanye neziqu, ezifana ne-ISO9001, DMF, NSF, KOSHER, HALAL, ECOCERT, COSMOS, Ilayisense Yezokukhiqiza Yezidakamizwa, isitifiketi se-High- tech Enterprise, njll. Futhi siyaqhubeka sikhula futhi sikhula. Izwi kanzima, ikusasa eliqhakazile liza.
NO.488 Huanghe12 Road, Binzhou edolobheni, ShandongProvince, China
Ukudla kwebanga le-HA
injunju yebanga HA
Qalisa kabusha ukukhiqiza 2020.8
Ibhilidi leqembu elakha i-2020.7
Izitifiketi Zibuyekeziwe (2020/6/23)
COA Ukubuyekeza Isitatimende
Logo Guqula Isitatimende
I-Oligo sodium hyaluronate , I- Eye lehla grade sodium hyaluronate, I- Umjovo grade sodium hyaluronate